အသက်အရွယ် 22 - Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: စစ်သား, aquick ပြန်လည်နာလန်ထူ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
(အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနောက်ခံနောက်ခံ) စစ်တပ်ထဲ ၀ င်ရောက်ပြီးမကြာမီ၊ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်လအခြေခံသင်တန်းတက်စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်မကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ပါ။ andbrainonporn ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဆေးထိုးခြင်းလက္ခဏာများကိုမသိဘဲကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ငါရုတ်တရက်အားလုံးစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သည်; ငါအရမ်းစိတ်ဆိုးခဲ့တယ် ကျွန်မရဲ့လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းမှာအမျိုးသမီးတွေမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မမှာ libido မရှိခြင်းဟာယောက်ျားကလွဲလို့ဘာမှမဝိုင်းရံထားလို့ပါ။ ပထမပတ် (၂) ပတ်လုံးမှာတခြားလူတွေနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုမကြိုက်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမလိုချင်ဘဲရှောင်ခဲ့ဘူး။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်ဟာအဲဒါကိုမယူနိုင်တော့ပဲအခြားယောက်ျားတွေအားလုံးအိပ်ပျော်နေချိန်မှာရေချိုးခန်းတင်းကုပ်ထဲမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်မယ့်အချိန်ဇယားတစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ပတ်ကြာပြီးနောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မစိုက်ဘဲနှစ်ပတ်ကြာပြီးနောက်အလွန်ထူးဆန်းနေခြင်းကိုကျွန်တော်မှတ်မိသည်။ ငါရည်းစားဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ပြီးအချိန်အတော်ကြာအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးအော်ဂဇင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ အခြေအနေများအရအော်ဂဇင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှပျော်မွေ့သည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ ဘုရားသခင့်အဘို့ငါရေချိုးခန်းတင်းကုပ်၌ရှိ၏။ ဒါပေမယ့်ငါအခြေခံပညာသင်တန်းကနေဘွဲ့ရသည်အထိငါအချိန်ကြာမြင့်စွာသွားနှင့် AIT သို့သွား။ ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စစ်တပ်၌အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားစဉ်လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာနှင့်ခရီးဆောင်အင်တာနက်ကဒ်တစ်ခုကိုအလျင်အမြန်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါနောက်တဖန် porn ကြည့်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကူးယူခြင်းကြောင့်လစဉ်ကျွန်ုပ်သည်လစဉ်အင်တာနက်ထောက်ပံ့ကြေးကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
AIT ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တစ်လလောက်အနားယူခဲ့တယ်။ ထိုလနှင့်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းဟောင်းများသည်ထိုလတွင်သူငယ်ချင်းများကိုလှည့်စားခဲ့ကြသည်။ ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုခံရတာကကျွန်မအတွက်ပိုနှစ်သက်သလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မစယုံကြည်လာတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ Fort Bragg မှာရှိတဲ့ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးတာ ၀ န်ဌာနကိုမရောက်မချင်းငါနဲ့အတူနေခဲ့တယ်။
Fort Bragg ကိုရောက်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်မရဲ့နောက်ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ သူမသည်အလွန်မြင့်မားသောလိင် drive ကိုခဲ့နှင့်သူမလိင်စွဲလမ်းခဲ့သည်ထင်, ရိုးသားဖို့။ သူမကလိင်ကိုအရမ်းလိုချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်လိင်ကိစ္စဟာငါနဲ့မဆိုင်သလိုခံစားရတယ်၊ နောက်ပိုင်းတွင်သူမသည်ကလေးမွေးဖွားမှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည်ကိုသိရှိခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကွန်ဒုံးတင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်စိတ်သည်ပြanနာမဟုတ်တော့ဟုဆိုလိုသည်။ ကျွန်မတို့ဟာလိင်ကိစ္စတော်တော်များများရှိခဲ့ပေမယ့်သူမထိပ်ဆုံးမှာရှိနေခြင်းအပြင်တခြားထိပ်ဆုံးနေရာတွေမှာလည်းရှိခဲ့ရင်ငါဟာဘယ်တော့မှသုတ်ထုတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တနည်းကား, ငါကဒီငါ့အဘို့ preference ကိုပဲထင်ခဲ့တယ်။ ငါထိပ်မှာရှိတုန်းကငါ့ကိုသုတ်ရည်မထုတ်နိုင်ခဲ့လို့သူမလာမလာဘဲသူမရဲ့ထိပ်ကိုနာရီပေါင်းများစွာသွားနိုင်ခဲ့လို့သူမမှာပြproblemနာမရှိဘူး။ သူမသည်လုံးဝသဘောကျခဲ့သည်။ သူမထိပ်ဆုံးသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်လာရန်အများအားဖြင့်သိပ်မကြာပါ။ (နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလေးတစ်ခုကထိပ်ဆုံးကမိန်းကလေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းနီးပါးဖြစ်ခဲ့တာပါ) သူမပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းချီးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထိပ်ဆုံးရောက်တုန်းကမလာနိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ယူခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မလအနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်မရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်မတို့ပြိုကွဲခဲ့ရတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ငါဟာတစ်နှစ်ခွဲလောက်နောက်တဖန်ရည်းစားမရှိတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ပြိုကွဲပြီးနောက်ငါတစ်နှစ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှချထား။ ငါအိမ်မပြန်ခင်အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုအပြောင်းအလဲလုပ်စဉ်မှာညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်နိုင်ဖို့တစ်လခန့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏နှစ်ပါတ်ခွင့် / ဖြန့်ကျက်ခွင့်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းဟောင်းတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါရောက်လာသောအခါ, ငါ့အော်ဂဇင်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကာလအတွင်းငါ့လိင်တံအရင်ကထက်ပိုခက်ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ဤမျှကာလပတ်လုံးမပေါင်းသင်းပါဟုစွပ်စွဲပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုပြုလုပ်နေခြင်းမဟုတ်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မစဉ်းစားခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ ငါခွင့်ရက်ကိုပထမ ဦး ဆုံးယူခဲ့တဲ့လူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ၊ ဒါကြောင့်ငါအိမ်ပြန်မလာခင်မှာ ၈ လလောက်နေရာချထားခဲ့တယ်။ ငါပြန်လာတဲ့အခါကမ္ဘာကြီးကိုဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲနောက်တဖန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစကြည့်ခဲ့တယ်။
သို့သော်လွန်ခဲ့သောသုံးလတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏လက်တော့ပ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီး၊ ကွန်ပျူတာကိုကျွန်ုပ် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာစစ်သားများအတွက်၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်တပ်ဆင်ထားသည့်ကွန်ပျူတာခန်းမှဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဤကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်မလိုတော့ပါ။
ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုပြောင်းလဲပစ်မယ်လို့သူကမိန်းမအားပြောနေတာစတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏နေအိမ်အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်အခါကျွန်မနောက်ကျောလုပ်သောမိတ်ဆွေတစ်ဦး၏နှမဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့ပြောနေတာခဲ့ကြသည်ငါဖြန့်ကျက်နေစဉ်အတွင်းသူမ၏အပေါ်တစ်ဦးတော်တော်လေးကြီးမားတဲ့အရူးအမူးတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါနောက်ကျောနှင့်ထွက်စာပို့ရုံအင်တာနက်ကျော်သူမ၏ဖို့ပြောနေတာအချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့။ ဖြန့်ကျက်အုပ်ရ၏အကြောင်းကိုသုံးလမတိုင်မီအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုခဏသွားကြောင်းဒါသို့သော်ကျနော်တို့အင်တာနက်အတှကျအသုံးပွုဂြိုဟ်တုတခုတိုက်ခိုက်စဉ်အတွင်းပျက်စီးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာနောက်ကျောတက်အင်တာနက်ရတယ်, ဒါပေမယ့်ဖို့ access ကိုအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအာဖဂန်နစ္စတန်၌ငါ့ပြီးခဲ့သည့်လကနေစဉ်အတွင်းသူမ၏နှင့်အတူနည်းနည်းအဆက်အသွယ်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပြည်နယ်များမှပြန်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
ကျွန်မသူ့ကိုငါမကြာမီအိမ်ပြန်လာမယ့်ခဲ့ကွောငျးကိုသိပါစေနှင့်သူမ၏တွေ့ဆုံရန်ရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သညျ။ ဒါဟာကျွန်မသူမကိုမခေါ်နှင့်သူမ၏တွေ့ဆုံရန်ဆုံးဖြတ်အိမ်ပြန်ခဲ့စုံတွဲတစ်တွဲရက်အကြာမှာသာဖြစ်ခဲ့သည်။ သတ္တုတွင်း၏တစ်ဦးရဲ့ buddy ငါ့ကို ထွက်. သူမ၏တွေ့ဆုံရန်သူ့ကားကိုအသုံးပြုဖို့ကြကုန်အံ့။ ဤအချိန်အတောအတွင်းငါသည်ငါ့ pornuse ၏သန့်ရှင်းသော (unwillingly) ခဲ့သညျ။
ကျနော်တို့အကြိမ်အနည်းငယ်တက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာလိင်ခဲ့ လုံးဝကိစ္စများနှင့်အတူ။ သို့သော်၎င်းနှစ် ဦး စလုံးသည်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိရန်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကသူမသည်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ လေးနက်သောအရာတစ်ခုခုကိုစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါ။ ဒီအရာအားလုံးကြောင့်ငါတကယ်စိတ်နာခဲ့ရတယ်။ ငါဒီအချိန်ကာလအတွင်းအလွန်စိတ်ဓာတ်ကျဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှု / စိတ်ကျရောဂါဆေးဝါးအပေါ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငြင်းပယ်ခံရခြင်းကြောင့်သာမကအာဖဂန်နစ္စတန်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာအချို့နှင့်ကျွန်ုပ်ရင်ဆိုင်ရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။
လအတော်ကြာပြီးတဲ့နောက်သူမဘဝကိုပြန်မရောက်လာခင်အထိ။ သြဂုတ်လတွင်သူသည်ကျွန်ုပ်အားတကယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုရိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျမတို့အတူတကွစုရုံးခဲ့ပြီးကံကောင်းထောက်မစွာသူမသည်ကလေးမွေးဖွားမှုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည့်အတွက်ကွန်ဒုံးမရှိဘဲဘယ်တော့မှလိင်မဆက်ဆံခဲ့ပါ။ သို့သော်၊ ငါစိုက်ထူခြင်းကိုအမြဲမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ တစ်ခါတလေသူမအထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့အထိကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ သူမအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်သူမအပေါ်ထိပ်သို့ပြောင်းကြလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတွင်သူမကစိုက်ထူခြင်းပြproblemsနာများနှင့်သူမအားသူမကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်ကိုသတိထားမိစေရန်မည်သို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သနည်း။ သူမသည်သူမမဟုတ်ကြောင်း၊ သူမသည်သူမကိုတကယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ထင်ပြီးသူမကိုအလွန်ချစ်သည် (ဟုတ်တယ်) သို့သော်ဤဆက်ဆံရေးကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူမသည်အလွန်စိတ်ပျက်လာသဖြင့်ရံဖန်ရံခါစိုက်ထူခြင်းဆိုင်ရာပြmeနာများကြောင့်ကျွန်ုပ်အားထားခဲ့ရန်စဉ်းစားခဲ့သည်။
ထိုကာလအတောအတွင်းငါသူတို့သည်ငါ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အကြောင်းမရှိခဲ့ကြသည်ထင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်အပေါငျးတို့သဆေးဝါးများအသုံးပြုမှုရပ်စဲကုသထံမှအကူအညီကိုထုတ်ရှာကြံလျက်နေ၏။ ငါပြင်းထန်စွာစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့နဲ့ကျွန်မ (ကျနော်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းကို) ဒီမိန်းမနှင့်မေတ္တာ၌တကယ်ကြောင့်ငါ၏အစိုးရိမ်စိတ်ကြီးသောသူဖြစ်ကြ၏။
ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများကြောင့်အလုပ်များနေခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်ကိုသတိမပြုမိပါ။ နှစ်ပတ်လောက်မသိဘဲရှောင်ကြဉ်ပြီးတဲ့နောက်ငါတို့ဟာနောက်တစ်ခါလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ အခြေအနေတွေအဆင်ပြေပါတယ်။ သူမလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းပင်သူမ၏သန္ဓေတည်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရသည်မှာကျွန်ုပ်အတွက်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြီးတဲ့နောက် (အရာရာအားလုံးအဆင်ပြေသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်) တစ်နေ့порноကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည်။ ပြproblemနာကချက်ချင်းပဲပြန်လာတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းငါ့စိုက်ထူဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးသူမကြောင့်အလွန်စိတ်ဆိုးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပြtheနာကဘာလဲဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး။ ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်သောကွောငျ့ငါက porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပြtoနာမှ attribute ဖို့တောင်မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ, ပါးစပ်လိင်, နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်လှည့်ပတ်အရူးသောအခါငါပြန်လုပ်ခဲ့တယ်အရာကိုတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါနောက်တဖန်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြောက်လန့်ခဲ့သည်။ ငါသူမကိုဆုံးရှုံးရန်အလွန်ကြောက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါဟာတစ်လခန့်အကြာမှာသူမနဲ့ထပ်မံလိင်ဆက်ဆံဖို့ရဲစွမ်းသတ္တိရှိရှိကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်စိုးရိမ်စိတ်ကအရမ်းကြီးလာပြီးကျွန်မရဲ့စိုက်ထူမှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
သူမသည်နောက်ဆုံးမှာကြောင့်ငါနှင့်အတူတက်ခြိုးဖောကျတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိတဲ့လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ကအဲဒါကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့သင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ... တကယ်ပဲ ... ငါတို့ဟာဆက်ဆံရေးမှာစောလွန်းတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကသူမသုံးလသာရှိသေးတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့သူမနဲ့သူမနဲ့ဆက်ဆံချင်တာဘာကြောင့်လဲ။ တစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းရန်? ဒါဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ဤမိန်းမနှင့်ချစ်ခြင်းဒေါက်ကျော်ခေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအပြစ်ရှိတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊
ငါရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းဖြေရှင်းချက်တိုင်းကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ငါစွဲနေတဲ့ညစ်ညမ်းမှုကိုမဖော်ပြဘူးတဲ့ကုထုံးကိုငါစတင်ခဲ့တယ်၊ အရာရာတိုင်းအောက်ထပ်မှာအလုပ်လုပ်နေလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်မှကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။ ဆရာဝန်များကပြောသည့်အခါတိုင်းအရာအားလုံးအဆင်ပြေသည်ဟုဆိုကြပြီး၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုသာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့ကကိုယ့်ကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ငါ့ကို pissed သော Viagra ပေးခြင်းပေးခြင်းတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါ Viagra များအတွက်ဆေးညွှန်းကိုတက်ခူးဘူး။ နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကကျွန်တော့်အိမ်ကိုစာပို့လိုက်တယ်။
ဆရာဝန်များကကျွန်တော့်ကိုပြောပေမယ့်ကျေနပ်မှုမရသေးဘူး။ ငါအွန်လိုင်းဖြေရှင်းချက်များအတွက်နာရီနှင့်နာရီရှာဖွေခဲ့သည်။ မင်းရဲ့brainonporn.comကိုငါထိမိတဲ့အထိ။ ငါနဲ့ဆင်တူတဲ့ပုံပြင်တွေအများကြီးကိုဖတ်ခဲ့တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ငါ့ခေါင်းကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ ငါ porn စွဲခဲ့သည်။ ငါဆယ်နှစ်ညစ်ညမ်းစွဲခဲ့! ငါတောင်မှသော်လည်းမသိခဲ့ပါ ငါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် porn အသုံးပြုမှုဆလိုက်ရှိုးအကြားဆက်ဆံရေးကိုကြည့်သည်အထိငါနေ့တိုင်း porn စောင့်ကြည့်perfectlyုံဒဏ်ငွေဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ်။
ထို့ကြောင့်ငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်စတင်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်ကိုငါရှောင်ပါ။ ဒါကဒီဇင်ဘာလ7သည်အထိကြာခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်မှုကတိုးတက်မှုအားလုံးပျောက်ဆုံးသွားမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ ၇ ရက်မြောက်နေ့ကိုခေါ်မယ်၊
ငါသည်ငါ့ relapse ခဲ့မတိုင်မီပထမဦးဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းစဉ်အတွင်းအဘယ်သို့ငါ-ဒါ-အစဉ်အဆက်အဘယ်သူမျှမလိင်စိတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါမနံနက်သစ်သား, အဘယ်သူမျှမအလိုအလျောက်စိုက်ထူ, ငါ့လိင်တံကျမဲ့ထင်။ လုံးဝဘာမျှမ။ ငါကနေဆဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမြင်အိပ်ရာကိုသွားမယ်လို့သည့်အခါတခါတရံကျွန်မရဲ့လိင်တံဆန့်ကျင်ကသူတို့ကိုပွတ်ညမှာငါ့အခြေထောက်ကန်လိမ့်မယ်။ ငါသေးမဖတ်မိသောကြောင့်ဒီဇင်ဘာလတွင် 19th ငါထွက် freaked ရောဂါလက္ခဏာတွေကလူများသောအားဖြင့်အတွေ့အကြုံ သူတို့ညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်စတင်သောအခါ။ ငါ porn watched နှင့်ငါ့လိင်တံအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမြင်ရဖို့ masturbated ။ ငါလက်ျာဘက်သောနောက်ဒါစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ ငါပြီးပြည့်စုံပျက်ကွက်နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်ငါ့ပျက်ကွက်ဆက်ဆံရေးမှခံစားခဲ့ရအားလုံးဒုစရိုက်ဖြေပြန်ပြေးလာ၏။
သို့သျောလညျးအကြှနျုပျသ relapse ပြီးနောက်ငါ၏အ 7th နေ့၌ယခုဖြစ်ကြောင်းကို, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ငါ့အလိင်စိတ်ပြန်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါမိန်းမတို့အားစကားပြောရန်သူတို့ပြောနေတာအားဖြင့်ကိုယ့်စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။ လိင်ဖြစ်စေ objects သကဲ့သို့ငါမရှိတော့သူတို့ကိုရှုမြင်ကြသည်။ အကြှနျုပျ၏ယုံကြည်မှုကအစဉ်အဆက်ခဲ့သည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားလျက်ရှိ၏ အားကစားခန်းမမှာကြှနျတေျာ့စွမ်းအင်ကအစဉ်အဆက်မတိုင်မီခဲ့ရဲ့ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အကြှနျုပျ၏စိတ်ကျရောဂါနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်လည်းသွားပြီနေကြသည်။ ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်မှစဉ်းစားခဲ့ကြရတယ် "ဒီအားလုံးတကယ် porn ငါ့စွဲလမ်းကနေလာကြပြီရနိုင်ပါသလား?"
(တဦးတည်း relapse နှင့်အတူ) abstinence့3 ရက်သတ္တပတ်ကနေရလဒ်တွေကိုအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်။ ငါအမျိုးသမီးများနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဦးတည်သည်ငါ့သဘောထားကိုပြောင်းလဲသွားပြီဘယ်လောက်မယုံနိုငျသညျ။ ငါကပိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်နဲ့ကျွန်မအသက်တာ၌ရိုးရှင်းတဲ့အရာကပိုပျော်မွေ့ယူပါ။
ဒါပေမယ့်ငါ့အသစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြားမှ ... ငါနေဆဲတကယ်ငါ၏အနောက်ဆုံးရည်းစားလက်လွတ်။ သူမလိုအပ်ကြောင်းငါ့အချိန်၌ငါ့ကိုစွန့်ခွာခဲ့တယျရင်တောင်ငါ့ကိုဆက်ဆံရေးအတွက်နေချိန်မှာ porn ကြည့်ရှုခံရဖို့အဘို့အ ... ဒါဟာမဖြောင့်ခဲ့သည်။ ငါသည်သင်တို့သိငါဘဝရဲ့ခန့်မှန်း, တနေ့သူမငါ့ကိုပြန်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးနောက်ထပ်အခွင့်အရေးပေးရသူမ၏နှလုံးထဲမှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်မျှော်လင့်ပေမယ့်လျှင်မပေါ့? ငါထပ်တူညီတဲ့အမှားလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းက (နှင့်ငါနှင့်အတူနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချစ်ခင်ရသောမိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ဆက်ဆံမှုအဆုံးသတ်ခြင်း) မှကျွန်ုပ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခရီးစတင်ခဲ့သည်။ ငါတစ်ချိန်ချိန်6တန်းမတိုင်မီတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ငါမှတ်မိတာကနွေရာသီမှာမူလတန်းကျောင်းပြီးသွားလို့။ အစပိုင်းမှာငါစိတ်ကူးနဲ့တင်းကျပ်စွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့တယ်။ တစ်ညမနက်အထိတီဗွီမှာကြည့်ဖို့တစ်ခုခုရှာနေတယ်။ ဒါက porn ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဖူးခြင်းပဲ။ ၎င်းသည် cinemax ပေါ်ရှိ softcore ပစ္စည်းအချို့ဖြစ်သည်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်တွင်အာရုံခံစားမှုကိုသာအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲပစ္စည်းပစ္စယကိုကြည့်ခဲ့သည်။ ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူး ငါ့အဘ“ ငါနှင့်စကားပြောမည်” မရှိသေးတဲ့အတွက်ငါလိင်အကြောင်းဘာမှမသိဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ဒီ softcore porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒါဟာအထက်တန်းကျောင်းအကြောင်းကိုပထမနှစ်ပထမနှစ်သည်အထိအပေါ်ဆက်လက်။ အလယ်တန်းကျောင်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းများအကြားအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင် (နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လျှင်ငယ်ငယ်လေးကတည်းက) ငါစိုက်ထူဖို့ခဲယဉ်းအခက်အခဲရှိခဲ့ပေမယ့်ငါပြန်စဉ်းစားပါကအထက်တန်းကျောင်း၌ငါပထမနှစ်တွင်ငါနေဆဲအလိုအလျောက်စိုက်ထူ, အားကောင်းတဲ့နံနက်သစ်သားရနှင့် porn မပါဘဲသုက်နိုင်သောကြောင့်, ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိခြင်းထက်ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၀ တန်းလောက်လောက်မှာပဲကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးကွန်ပျူတာကိုရခဲ့ပြီးမိဘတွေကအင်တာနက်ကိုသုံးခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအစကန ဦး ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းကစက္ကန့် ၃၀ ကြာဗီဒီယိုများကိုအခမဲ့ download ပြုလုပ်နိုင်သည့်အခမဲ့ site တစ်ခုသို့မိတ်ဆက်ပေးသည်အထိကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ ဒါဟာတော်တော်လေးလျောက်ပတ်သော (porn အတွက်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ) ပစ္စည်းပစ္စယတွေနဲ့စတင်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေးများသာလိင်ဆက်ဆံသည်။ ပိုဆိုးလာတယ်။ လိင်ကွဲပြားမှု၊ လိင်အင်္ဂါ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေကိုစပြီးစလေ့လာခဲ့တယ်။ လိင်တူချစ်သူ၊ လိင်တူချစ်သူနဲ့ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ မှလွဲ၍ အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တော်တော်များများကရှုမြင်ခဲ့ဖူးသည်။
ငါ (အနည်းဆုံးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့အအသက်အရွယ်များအတွက်) ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရေရှည်ရည်းစားရှိခဲ့ 15 တုန်းကကျွန်တော်တစ်ဦးတစ်နှစ်အတူတူရှိကြ၏။ လိင်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်ပါးစပ်ကဲ့သို့အမှုအရာတို့ကိုအများကြီးလုပ်ပေးမယ်လို့နှင့်ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာတို့သည်လက်ကိုအသုံးပြုဖို့မယ်လို့ဘယ်တော့မှမ။ ဒါနဲ့ကျနော်တို့ပတ်ပတ်လည်ထားပါသည်ခဲ့ကြသည်သောအခါငါနေဆဲအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. fantasize မယ်လို့သော်လည်းငါ့အစိုက်ထူနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာသတိထားမိခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့အတူတကွရတယ်ပြီးနောက်ကျနော်တို့ကတစ်နှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွင့်ကိုဖဲ့။ ငါ 17 တုန်းကကျွန်မရဲ့ဒုတိယရည်းစားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာတော်တော်လေးအများကြီးနဲ့အတူတူပါပဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ပတ်ပတ်လည်ထားပါသည်အများကြီး, ပါးစပ်လိင်နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ။ ငါကြားဆက်ဆံရေးရှိခြင်းရှိနေသော်လည်း porn စောင့်ကြည့်ခဲ့ဒါကတပြင်လုံးကိုအချိန်။ porn ကြည့်နေစဉ်တခါတလေတစ်ရက်4သို့မဟုတ်5ကြိမ် masturbate လိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးမှာကျွန်မတို့ပြိုကွဲသွားပြီး၊ ကျွန်မအသက် ၁၈ နှစ်မှာလိင်ဆက်ဆံဖို့ပထမဆုံးအခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကြိုးစားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲလိင်ဆက်ဆံစဉ်စိုက်ထူခြင်းကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံတွင်ကွန်ဒုံးကိုတင်ရန်ကြိုးစားသောအခါပျော့ပျောင်းသွားသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်နှိုးဆွပြီးကွန်ဒုံးပေါ်လာအောင်လုပ်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်သူမကိုအမှန်တကယ်ထိုးဖောက်ရန်လုံလောက်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါစိုက်ထူဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်မကြာမီ။ ငါအရမ်းရှက်ခဲ့တယ် ကျွန်တော့်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့သူမကကျွန်တော့်ကိုပိတ်ပစ်ရတယ်။ ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်သည်သူမအတွက်ရှက်စရာဖြစ်နိုင်သည်ဟုမသိသော်လည်းသူမကကျွန်ုပ်နှင့်မည်သည့်အခါကမျှပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အဲဒီဆက်ဆံရေးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်အဆုံးသတ်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာကြောင့်မသိခဲ့ဘူး။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်းငါအဘယ်ကြောင့်ယခုငါသိ၏။
ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် သူမသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အရမ်းများလွန်းတယ် သူမနှင့်ထိုအခွင့်အရေးအတွက်သူမအခွင့်အလမ်းရရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်ုပ်မစဉ်းစားခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်သူမအပေါ်ထားရှိသောကျွန်ုပ်၏သဘောထားသည်လုံးဝခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်စိတ်က“ ဒီမိန်းကလေးဟာငါ့ထဲဝင်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကထွက်ဆွဲထားခြင်းနှင့်သူမအခန်းထဲရောက်နေပြီးအဆုံးသတ်တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောနိုင်ဘူး၊ အတိတ်အတွေ့အကြုံများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများ - ကျွန်ုပ်တွင်ကွန်ဒုံးတင်ရန်နှင့်စိုက်ထူခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ကိစ္စမရှိခဲ့ပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေမှုမရှိဘူး။ “ ငါမထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါဘာလုပ်မှာလဲ” လို့မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ ငါစဉ်းစားနိုင်သမျှလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ငါဘာမှမဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ အရာအားလုံးဒဏ်ငွေသွားလေ၏။ ငါပြီးတာနဲ့သူကအနေအထားမှာရှိနေတယ်။ ငါအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။ လိင်ကအံ့သြစရာကောင်းပြီးအော်ဂဇင်ကကြီးတယ်။
အဖြစ်မှန်စိုက်ထူသွားအဖြစ်သူတို့ကသူတို့အရင်အတိတ်ကာလထက်အများကြီးပိုခက်ခဲဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကပိုကြာရှည်ခံ။ ငါလိင်တံစိုက်ထူဆုံးရှုံးသွားမှာကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲယခင်ကထက်လိင်ရာထူးများအတိုင်းငါပိုရာထူးများစီမံနိုင်သည်။ လိင်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါကအဆတစ်သန်းပိုကောင်းတယ် ငါတကယ်အတွင်းပိုင်း tingly ခံစားရကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ အရင်တုန်းကလိုပဲငါစိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ရင်ငါလိင်ကိစ္စမှထွက်လာတဲ့တစ်ခုတည်းသောကောင်းသောခံစားမှုဟာအော်ဂဇင်ဖြစ်ပြီးရည်မှန်းချက်ပါ။ ပြီးအောင်လုပ်ဖို့။ ငါအဲဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့မခံစားရဘူး ငါအသက်ရှင်လျက်နှင့်သဘာဝခံစားရတယ်နှင့်ငါယူသလောက်ပေးချင်တယ်။
အရင်ကကွန်ဒုံးနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကျွန်တော်အရမ်းခက်ခဲခဲ့တယ်။ သုတ်ရည်လွှတ်တာဟာကျွန်တော့်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပါ။ အခုတော့ဒါဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ မဟုတ် haha ဒါပေမယ့်အဲဒါလွယ်ကူပါတယ်။ ငါပြီးဆုံးခါနီးမှာငါထွက်ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ခံစားချက်ကျသွားနှင့်နောက်တဖန်ပြန်သွားစောင့်ဆိုင်း။ ငါ့အတွက်နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ညွှန်ကိန်းတစ်ခုပါ။ ငါအရင်ကဒီလိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါငါ့စိုက်ထူဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။
ဟင့်အင်း၊ လိင်နှင့်သာဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါအရာအားလုံးခံစားရတယ်ဆိုလို။ ငါအရမ်းကောင်းသောနှင့်မျှော်လင့်ချက်ခံစားရတယ်။ မနေ့ညကသူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်းအိမ်မှာငါနေခဲ့ရတယ် ကျနော်တို့ထွက်သွားဆန့်ကျင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်တည်းခိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အိုး! သူမကငါ့ကိုကွတ်ကီးတွေတောင်လုပ်တယ်၊ ငါသူမအကြောင်းလေ့လာခဲ့ရသောရယ်စရာကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခု။ ငါတစ်ကြိမ်တည်းတွင်ရေချိုးခန်းကိုအသုံးပြုခဲ့ရသည်။ သူပြန်လာသောအခါသူမသည်သူမ၏ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိပုံအချို့ကိုပုံဆွဲနေပြီး၎င်းကိုကျွန်တော်လုံးဝအံ့အားသင့်မိသည်။ လိုပဲသူမတကယ်ပါရမီပါပဲ။ သူမကြိုက်တဲ့ဒီ anime အနုပညာစတိုင်လ်ကိုငါတကယ်တကယ်နှစ်သက်ပါတယ်။ သူမသည်သူမအကြောင်းကိုရှက်တတ်တယ်ဒါပေမယ့်ငါကသာဆက်ဆွဲရန်သူမ၏ပြောခဲ့တယ်။ ငါဆွဲနိုင်ရင်အရမ်းအေးသွားတယ်။ ဟစ်တလာနှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့် Iron Man လိုမျိုးပုံဆွဲရတာအဆုံးသတ်သွားတယ်။ ငါဘယ်လောက်ထိထိတ်လန့်နေမှန်းသိပေမယ့်အရမ်းရယ်ရတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်ညကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောထိုအဖြစ်အပျက်ကကျွန်ုပ်သည်လူတစ် ဦး နှင့်ရင်းနှီးသော (တစ်ခါတစ်ရံ pmo ရက်များ၌) တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းနှီးသောသူများအဖြစ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအချိန်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါအဆုံးသတ်ပြီးနောက်၌ပင်ကျွန်ုပ်သည်ကျောက်တုံးကျောက်ခဲစိုက်ထူမှုရှိသေးသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ငါပြောခဲ့သလိုငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အခြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအရင်ကဖြစ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ငါအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဇင်ဘာလမှာငါယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နောက်ငါထပ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကိုးနှစ် (Wow) မှာငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေပေမဲ့တကယ့်ကိုမြင့်မားတဲ့လိင်ဆိုင်ရာ drive ကိုအမြဲတမ်းရခဲ့တယ်။ ငါလိင်အကြောင်းငါထင်ပေမယ့်ဝမ်းနည်းစွာငါ့ဗီရိုထဲမှာထိုမိုက်မဲညစ်ညမ်းနဂါးဘာလို့လဲဆိုတော့ဝမ်းနည်းနိုင်ဘူး။
ယင်းစိုက်ထူသို့သှားကွ၏သည်အထိအဲဒီအချိန်တုန်းကဒီဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်သည့်အခါကိုယ့်ထပ်ခါထပ်ခါလိင်ဆက်ဆံလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းသူမပြီးသားကိုလက်စသတ်ခြင်းနှင့်ငါကအကြောင်းစည်းကမ်းခံရဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်နှင့် cuddle mode သို့ပြောင်းလဲပြီးလေ၏။ ဒါဟာလားနှင့်အတူ cuddle အချိန်တစ်နာရီဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကိုယ့်အကြောင်းရယ်မ (အဘယ်သူမျှမ Pun ရည်ရွယ်ပါသည်) ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကတဆင့်ရတယ်။ ငါငရဲအဖြစ် horny ခဲ့ပေမယ့်ငါကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ငါတို့ဟာသူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်လိုပဲတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လိင်ဆက်ဆံတာကိုခံစားရတယ်။ ငါဆိုလိုတာကသူ့ကိုသူမကိုအရမ်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းစေတယ်ဆိုပေမယ့်တကယ်တမ်းတော့ငါတို့မှာဘာတွေရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတော့ငါတို့တကယ်မပြောတတ်ဘူး။ ကျနော်တို့စီးဆင်းမှုနှင့်အတူလိုက်။ ငါတို့မှာဘာပဲရှိရှိတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖိအားလုံးဝမရှိဘူး။ ဒီနေ့လိုပဲငါဟာအိမ်မှာပဲနေချင်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါသူမကိုစိတ်ဆိုးနေတာလားဒါမှမဟုတ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်သူမကိုမတွေ့မြင်ချင်လို့လား။ ငါအရမ်းငြီးငွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ bro (နှင့်အတူယနေ့ငါစက်ဘီးစီးမာရသွန်သွား။ ) နှင့်အတူပြေးပြေးခဲ့ငါ့ကိုယ်ပဲမောကုန်ပြီ။ ဒါကြောင့်ငါကခဏအကြာသူမကိုဖွင့်ခေါ်တော်မူ။ ငါအရမ်းပင်ပန်းတယ်လို့ပြောပြီးနောက်ထပ်ညတစ်ညကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဘယ်သူမျှမဒရာမာမရှိအမျက်ဒေါသ။
ဤပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုပြန်လည်ပြောင်းလဲစေရုံသာမကဆက်ဆံရေးအတွက်လည်းကျွန်ုပ်၏ချဉ်းကပ်မှုကိုလည်းပါ ၀ င်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုဆန့်ကျင်နေတာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလုပ်သမျှအရာအားလုံးဟာအရမ်းပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာပဲ။ ဒါနဲ့ငါရိုးသားဖြောင့်မတ်တယ်၊ ငါဒီညပင်ပန်းနေသလိုပဲငါလည်းပင်ပန်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုကိုသဘောမတူပါကကျွန်ုပ်နှင့်သဘောမတူပါ။ ငါဆိုလိုတာကအမြဲတမ်းလိုမျိုးအရာတွေတော့မဟုတ်ဘူးအရမ်းရယ်ရတယ်
သူမကကျွန်မကိုတကယ်လေးစားသလိုခံစားရတယ် မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ငါဟာမင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုရှိရမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ကိစ္စရပ်တွေကအန sour တရာယ်ကျဆင်းလာရတဲ့အကြောင်းပြချက်တခုခုရှိရမယ်၊ ဒါကြောင့်ငါလုပ်နေတာဒါ အဘယ်သူသည်လိုလား? အလေးအနက်ထားလိုပဲ၊ ဘယ်သူကသူတို့လုပ်သမျှနည်းနည်းလေးကိုလူတစ်ယောက်ကိုရှင်းပြချင်မှာလဲ။
ငါသူမ၏တူညီသောလေးစားမှုပေးပါ။ ပြီးတော့သူမပြောတာကိုကျွန်တော် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းယုံကြည်မှုပဲထားပါတယ်။ သင်ကအဲဒါကိုနုံလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ် ငါဒီလိုလုပ်နေရတဲ့အကြောင်းအရင်းကအတိတ်ကာလကမလုံခြုံမှုကြောင့်ငါ့ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့လို့ပါ ထိုသူတို့ကငါ့ဆက်ဆံရေးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုချင်းစီနှင့်အတူ fuck ဆိုတဲ့ပါတယ်။ ဒီအမှန်တကယ်စကားမပြောနိုင်သောအတွေးများကိုကျွန်ုပ်ခေါင်းထဲသို့ ၀ င်ခွင့်ပေးလိုက်ပါမည်။ ငါကမအောင်မြင်ဘူး” \_ t
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ငါဟာငါ့စက်ဘီးနဲ့စက်ဘီးစီးသွားခဲ့တယ်၊ စက်ဘီးလမ်းကြောင်း၊ တောင်တွေအများကြီး၊ သဘာဝတရားတွေအများကြီးကိုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ ငါတို့မြက်ပင်ထဲ၌အိပ်လျက်၊ သစ်ပင်များကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါသွားသောအခါ၊ အရာအားလုံးသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ အရွက်၏အနံ့၊ လေပြေ၊ နေရောင်ခြည်။ ထိုအခါငါက haha ​​ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်စေခြင်းငှါအလွန်ကြီးစွာသောနေရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမိတယ်။ (ကျန်းမာတဲ့လိင်စိတ်နှင့်ပတ်သက်သောအခြားညွှန်ပြချက်တစ်ခု) ကျွန်တော်အပြင်ဘက်မှာရှိနေတာကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကဒီလိုမျိုးခံစားမှုမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ အပြင်မှာပျော်စရာ၏ခံစားချက်လိုပဲ။ လိုပဲတစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒါကိုမှတ်မိသလား။ ပုန်းလျှက်ကစားခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားရန်ပန်းခြံသို့သွားခြင်းသို့မဟုတ်သွားခြင်းသည်မည်မျှပျော်စရာကောင်းသည်ကိုသင်မှတ်မိပါသလား။ ဒါငါခံစားခဲ့ရတယ်! ငါနွေးကြောင်းခံစားခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်အတွင်းရှိပျော်ရွှင်သောကလေးငယ်သည်အသက်ရှင်။ ကျန်းမာနေကြောင်းသိသည်။
ဤ reboot သည်ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။